परदेशिएका नेपालीहरूकाे पीडाः परदेशमा कहिल्यै आउँदैन दसैं! – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > परदेशिएका नेपालीहरूकाे पीडाः परदेशमा कहिल्यै आउँदैन दसैं!
admin October 15, 2021 Uncategorized 0
‘निधारमा टीका नभएर के भो त? थाप्लोमा हाम्रो आशीर्वाद छँदैछ,’ आमाले फोनमा यसै भन्नुभयो। कता कता मन खिन्न भयो। शरीर स्वचालित यन्त्र भइसकेको छ। मन-मुटु सबै घरतिर पुगेको छ। बच्चा हुँदा टीका लगाएपछि ५ रूपैयाँ भन्दै झगडा गरेको याद ताजै छन्।
टीका लगाएर २० रूपैयाँ दिने अंकल हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेलाको २० रूपैयाँ पाउदा आफूलाई संसारकै धनी लाग्थ्यो। केही वर्षअगाडि अंकललाई खाडीले निल्यो। आफूलाई मनपर्ने मान्छे समयले छिटै खोसेर किन लैजान्छ? खाडी छिर्नु मेरो पनि रहर थिएन, बाध्यताले छिरेँ। घरमा आफूलाई मनपर्ने चाड दसैं आएको छ। यो मरूभूमिमा न चाडपर्व आउँछ न रमाइलो।
देश छाडेपछि देशको जति माया अरू केहीको लाग्दैन। चाडपर्व आउँदा होस् वा बिरामी हुँदा, घरको जति याद कसैको आउँदैन। यो देश छाडेर परदेश आउनु धेरै नेपालीको सामूहिक पीडा हो। चाडपर्व नेपालमा आउँछ तर परदेशमा आउँदैन। परदेशमा आउने भनेको नै घर सम्झेर आउने आँशु मात्रै हो। आँशु आउन यहाँ केही हुनुपर्दैन, केही नभएकैले आँशु आउँछ।
चाडपर्व भन्नेबित्तिकै भावनात्मक सम्बन्धसँग पनि निकट हुँदो रहेछ। घरमा रमझम छ, यहाँ फगत मेसिन जस्तो ज्यान मरुभूमिमा भौंतारिएको छ। थाहा छैन घर जाने कहिले हो? यो पनि थाहा छैन, यसपछिको दसैं परिवारसँगै मनाउन पाइन्छ कि पाइँदैन। अघिल्लो दिन सँगै कोठामा सुतिरहेको साथी कहिल्यै नफर्किने गरी अस्तायो। ऊसँग बुर्जखलिफादेखि दुबईका गल्लीगल्ली चहारेको याद ताजै छ। साथी असामको हो, तै पनि आफ्नै नेपाली दाजुभाइजस्तो लाग्थ्यो। नेपाली भाषी भएकाले हाम्रो आत्मियता गहिरो थियो।
यस कारण पनि मन ठेगानमा छैन। सरकारले त खाडी आउन दस हजारभन्दा बढी नतिर्नू भन्छ। सबै कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि फ्रि भिसा पठाउने अलसायाजस्तो कम्पनीमा आउन मैले म्यानपावरलाई एक लाखभन्दा बढी बुझाएको छु। म्यानपावर कम्पनीहरूले विदेश आउने नेपालीसँग एक लाखभन्दा बढी असुल्छन्, रसिद भने दसै हजारको मात्र दिन्छन्।
म्यानपावरले भने जति पैसा नदिए भिसा रद्ध गरिदिन्छु भनेर धम्की दिन्छन्। अनि भनेजति पैसा बुझाएर आउनुपर्ने बाध्यता छ। यसमा नेपाल सरकारको ध्यान कहिले जान्छ पत्तो छैन। सरकारले किन केही गरोस्? नेताका छोराछोरीलाई खाडी आउनुपर्दैन। आउनुपर्ने त गरिबका छोराछोरी न हुन्। साथी भन्दै थियो- घर छोड्दा अरू बेला खासै पीडा हुँदैन जति पीडा चाडपर्वमा वर्षभरीको पीडा एकैदिन हुन्छ।
मैले भनेँ, ‘नेपालमा त भोलि दसैंको टीका पो हो क्यार!’ उसले आँखाभरी आँसु राखेर भन्यो- परदेशीलाई के दसैं, के तिहार? हुन पनि परिवारसँग दसैं मनाउन नपाएको पाँच वर्ष हुन लागेछ। म दुबईको अल्कोज क्याम्पमा छु जहाँ हजारौं नेपाली दाजुभाइ छन्। उनीहरू टीकाका दिन मुटुमाथि ढुंगा राखेर अफिस जान्छन्। बिदा पाउनेहरू बिदा लिन्छन्। खसी काट्छन्। मिलेर पकाउँछन्।
बिदा नपाउनेहरू नि त्यो दिन रमाइलो गर्न भने छाड्दैनन्। दुबईका केही कम्पनीमा नेपाली धेरै छन्। ती कम्पनीले प्रायः नेपालीलाई छुट्टी दिन्छन्। छुट्टी नदिने कम्पनीले पनि टीका लगाउने प्रबन्ध गरिदिन्छन्। तर यो सीमित नेपालीको भाग्यमा हुन्छ। सबै कम्पनीले यो सुविधा दिँदैनन्।
दसैंमा निधार खाली नराख्न एकअर्काले टीका लगाइदिन्छौं। दुई-चार किलो मासु ल्याउँछौं। यसपटक मदिरा पनि ल्याएका छौं। यसरी नै दसैं मनाउने छौं। तपाईंहरू पनि जहाँ हुनुहुन्छ, त्यहीँ खुसियालीसँगै दसैं मनाउनुहोस्।
कठै! दसैंमा अमेरिका उड्न लागेकी अनिताको मन रु’ वाउने आ’त्मा ह’ त्याको पत्र (भिडियो हेर्नुस्)
असोज ३० गते शनिबार, हेर्नुहोस् यस्तो छ तपाईको राशि अनुसारको भाग्यफल…
कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन मानवमै गरेकाे परीक्षण सफल भएपछि चीनमा देखियो यस्तो खुशी!
स्व. मन्त्री अधिकारीको ७ दिनमै काजकिरिया ! न बाहुनलाई गौदान, न सेतो बस्त्र !